Maxaa sababay dib u dhaca ku yimid duulimaadyadii Muqdisho iyo Nairobe ee Kenya Airways? – Bandhiga
Maxaa sababay dib u dhaca ku yimid duulimaadyadii Muqdisho iyo Nairobe ee Kenya Airways?
Waxaa dib u dhac ku yimid duulimaad Khamiistii ay diyaarada Kenya Airways ka bilaabi laheyd magaalada Muqdisho iyo magaalada Nairobi ee caasimada kenya,ilaa iyo 5-ta bisha 12-aad ee December ee soo socota.
War saxaafadeed khamiisii uu soo saaray agaasimaha shirkadan mr Sebastian Mikosz ayaa xaqiijiyay in aysan bilaabi doonin howlahooda soomaaliya ilaa iyo inta ay ka dhameestirayaan waxyaabaha u dhiman.
Mr Mikosz ayaa macaamiisha diyaaradan Kenya Airweys waxaa uu u xaqiijiyay in aysan suura gal noqon karin in duulimaadkooda la filayay ay bilaabaan balse safarkooda ugu horeeya ay bilaabi doonan bisha soo socota.
Dib u dhaca arintaan ayaa waxaa uu ku sheegay diyaaradaha dheeraadka ah ee laga doonayo iyo ogolaanshiyaha safarkaan iyo waxyaabaha muhiim ah ee laga doonayo oo wali la dhameestirin,balse ugu danbeyn sida ugu wanaagsan ay ku dhameestiri doonan.
Diyaaradan Kenya Airways ayaa maalin kasta 7:40 am aroornimo ka soo bixi doonta Nairobi iyadoo muqdisho soo caga dhigan doonta 9:55 am subaxnimo.
Garoonka aden cade ayaa iyadana waxay dib uga kici doontaa 10:45-barqanimo iyadoo magaalada Nairobi ay ka caga dhigan doonta 1-duhurnimo.